Malunga nathi -Shenzhen Eyin Technology Co., Ltd.
I-Shenzhen Eyin Technology co., Ltd.yasekwa ngo-2008, umzi-mveliso ophambili wesandi esiseShenzhen, China. Sinabasebenzi abangaphezu kwe-100, malunga nemitha engama-5000 yesikwere semveliso.
Sijolise ekuyileni, ekuphuhliseni nasekuveliseni ibha yesandi, izithethi zemultimedia kunye nesithethi esincinci. Imveliso yeRMS yokuphuma kwamandla ukusuka ku-5W ukuya ku-200W nangaphezulu. Iimveliso zethu zi-CE, REACH ROHS, LVD & EMC, ERP, FCC, KC, BQB eqinisekisiweyo kwaye umzi-mveliso wethu yi-ISO kunye neBSCI eqinisekisiweyo.
Sineeworkshop esemgangathweni, zonke izixhobo eziphambili, iqela le-R & D lobungcali, kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho esemgangathweni yokuqinisekisa umgangatho weemveliso kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo. Ngaphandle koko, siyaqhubeka nokuphuhlisa iimveliso zethu ezizodwa, ezemfashini nezokhuphiswano, kuya kubakho iimodeli ezi-5 okanye ezi-6 zeemveliso ezintsha zentengiso yehlabathi minyaka le.
Oko kwasekwa, sihlala sibeka umgangatho kunye nodumo kwindawo ebaluleke kakhulu ukusikhokelela phambili. siya kubonelela iimveliso ezikumgangatho ophezulu iqabane lethu. Sele sisekele ubudlelwane bezoshishino obunobuhlobo kunye nabathengi eYurophu, e-USA, eMntla Melika, eMzantsi Melika, e-Afrika, empuma Mpuma nase-Asiya.
Samkela ngokufudumeleyo yonke imibuzo enoluvo evela ekhaya nakwamanye amazwe ukuze sisebenzisane nathi, kwaye sijonge phambili kwimbalelwano yakho.
Ibar yesandi, Ibar yesandi yeWifi yeTv, Iibhola zeSandi zeTv, Ibar yesandi ye Alexa, I-TV kunye ne-Soundbar Mount, Izithethi zeWifi zeSandi,